Kuchengetedza WordPress Website - The Guide From Semalt
Vakawanda e-commerce websites vanoiswa pa WordPress. Vanhu vakasiyana vanofunga kushanda kwekuita zvisikwa zvakasiyana-siyana zvinogona kuitika mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana dzeWebsitePress. Nemwoyo wose, iyo internet yakazara nevanhu vane zvosemitemo yezviito zvinotyisa. Kubva pane kuparadzaniswa kusvika ku spoofing, zvakajeka kuti vaseki vanogona kutsvaga webhusaiti yako nekuita zvimwe zvezvakaipa zvavozvinangwa zvezvinangwa - vichy idealia pro serum review. Kazhinji, vatengesi vanozvinyengera kuva vanhu vane rufaro mune SEO kukurudzira kana imwe sangano rauri kuita.Panzvimbo pacho, vanopedzisira vachiita zvimwe zvezvinyorwa zvikuru.
Mahombekombe akadai anogona kusanganisira nzvimbo yepasiti scripting (XSS), phishing, kuba munhuruzivo pamwe chete nekushambadzira kwenhema. Vanhu vazhinji vakatora mamiriyoni evanhu vane kadhi rechikwereti chekukwereta chete kuti vaende uye vanoitavanosiya kumashure kwavo. Mune zvimwe zviitiko, vanogona kuunza webhusaiti pasi uye kukwazisa vanhu nezvinhu zvinonakidza pamusana pekushandisa kwavo.Somugumisiro, kuchengeteka kweWebsitePress website yako uye yevashandi vako kunonyanya kuvimba nezvokuti wakangwarira seikuchengetedza ava vanosemesa.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt Digital Services, inopa humwe hunyengeri-hunopupurira, hunogona kuchengetedza webhusaiti yako kurwisana nevashori:
1. Shandisa mapeji ekuchengetedza akachengeteka.
Peji yekunyoresa WordPress kazhinji haisi yakachengeteka. Kuti aunoita zvekutengesa, zvinokwanisika kuita nenzira yako nechisimba nzira yako kupinda mu database yewebsite kubva pane imwe peji yekunyorera. Paunenge uchiita iweWordPress site, zvakakosha kufunga kuwedzera a / wp-login..php kana / wp-admin / pachirongwa chewebsite iwe uri kuchengeta. Ichi chiyero chinogonakudzivirira rudzi urwu rwekupinda pamwe chete nezvimwe zvinotambudza zvishoma. Kushandisa passwords zvakachengeteka kunogonawo kubatsira admin panel yewebsite yako yakakwirirakuchengeteka. Semugumisiro, rega mapepa epasiro akafanana sa 12345 kana kuti password kusinganzwisisike.
2. Chengetedza data uchishandisa SSL.
Iri kuchengetedzwa rakachengetedza rinoita kuti shanduko yeDhiyabhorosi pakati pe browser uye server yakachengeteka. Somugumisiro, mutengesi anogona kuva nenguva yakaoma kubvisa zvinyorwa zviripo mune d database.Panzvimbo yekuva nemazita uye nhamba, iyo hacker inosangana nekhodi.
3. Bvumidza 2-factor kuvimbiswa.
Imwe yenzira dzekudzivirira kuchengeteka kwakovatengi ndeye 2fa. Vamwe vekubudirira vanogadzirisa vanopedzisira vawana mapepawedi kune dzimwe nhoroondo. Zvisinei, 2-factor kuvimbiswakuwedzera chimwe chekuchengeteka kune equation. Somugumisiro, password yacho pachayo haina kukwana. Mushandisi wakashandiswa unofanirwa kuwanikwakubva pamushumo wetsamba yemutauro, izvo zvingave zvisina ruzivo kune hacker.
Vatengesi vanoumba hwaro hwehuwandu hwemhosva dzehupfumi dzinotarisana nehupenyu hwedu nhasi. ZvoseInyanzvi yekutengesa inoshandiswa kune imwe nzira yekugadzirisa kana kushambadzira. Izvo zvinokosha kune unodzidza webhusaiti kuti ave nechokwadi chokuti nzira dzekudzivirirwa kune vanonyangadza vanofanira kuve vakangwarira pamwe nekuvimbisa kuti vanogara vakachengeteka kubva kurwisana uku. Kuchengeteka kwe e-commerce yakowebusaiti iri mumaoko ako. Iyi nhungamiro inopa dzimwe nzira dzinopupurira, dzinogona kusimbisa kuchengeteka kwewebsite yako. Mune zvimwe zviitiko,kuchengetedza webhusaiti yako kune vanonyangadza vanogona kuva nechokwadi chokuti Your Search Engine optimization (SEO) miedzo inobereka michero sezvo Google isingaratidzinzvimbo yako sekusachengeteka.